Mootummaan Ertiraa miidiyaa Jarmanii Deutsche Welle ‘olola nurratti gaggeessaa jira’ jechuun himate - BBC News Afaan Oromoo
Mootummaan Ertiraa miidiyaa Jarmanii Deutsche Welle ‘olola nurratti gaggeessaa jira’ jechuun himate
Image copyright DW
Goodayyaa suuraa Biyyi Ertiraa miidiyaalee biyya alaa yeroo himattu kuni yeroo duraa miti
Mootummaan Ertiraa miidiyaan mootummaa Jarmaniin deeggaramu Deutsche Welle'n olola narratti gaggeessaa jira jechuun himate.
Sababa kanaanis, Ertiraatti Ambaasaaddarri Jarmanii waamamanii akka gaafataman Ministirri Odeeffannoo Ertiraa Yamaana G/Masqal ibsaniiru.
''Ministeerri Dhimma Alaa Ertiraa jibba walirraa hin cinne darbaa jiruufi gaazexeessummaa sirrii hin taane kana irratti Ertiraatti Ambaasaaddara Jarman ofitti waamee gaafateera,'' jechuun Obbo Yamaanan Tiwiitara irratti barreessan.
Miidiyaan buufata isaa biyya Jarman magaalaa Boon taasifate kuni 'olola' nurratti gaggeessaa jira jedhu qondaalli kuni.
Keessumaa dhimma waliigaltee nageenyaa Itoophiyaa waliin taasifamee fi tajaajila biyyaalessaa irratti gabaasa Afaan Ingilizii fi Afaan Amaaraan bahe eeruun himatan.
Gabaasichi maal ture?
Gabaasni Deutsche Welle midhaasseefi mootummaa Ertiraa akkasiin dallansiise kam akka tahe ifatti beekamuudhaa baatus, dhiyeenyatti barreeffamni marsariitii miidiyaa kanarratti bahe hinoolu shakkiin jedhu jira.
Guyyoota kudhan dura ittigaafatamaa deeskii Afaan Amaaraa ka tahe Luudgar Shaadomiskii, yaada mataasaa barreesseera.
''MM Abiy Ahimad nama jijjiiramaa tahanis, waliigaltee Ertiraa waliin godhaniif jecha badhaasa Nagaa Noobeelii mo'achuun isaanii sirrii miti,'' jedha yaada waliigalaa maxxansa kanaa.
Biyyi Ertiraa miidiyaalee biyya alaa yeroo himattu kuni yeroo duraaf miti.
#Eritrea's Foreign Ministry has summoned Germany's Ambassador to Eritrea to seek clarification/rectification of this incessant vitriol, which has nothing to do with objective journalism, by an outfit funded by the German Government.
— Yemane G. Meskel (@hawelti) 21 Onkololeessa 2019
Ertiraan walabummaa miidiyaa hacuucuun maqaan ishii yeroo hedduu dhaabbilee mirga namoomaafi pireesiif mormaniin ni ka'a.
Dhimma kana irratti mootummaa Jarmaniis ta'e dhaabbati miidiyaa kuni hanga yoonaa waan jedhan hin qaban.
Waa'ee BBC hoo maal jedhan?
Kana malees aanga'aan Twitter gubbaa barreessuu fi deebisuun beekaman Aabba Yamaanan BBC ilaalchisees waa jedhaniiru.
Ergaa Twitter ka Deutsche Welle itti himatan gubbaa, namni biraan gaaffii 'BBC irrattis tarkaanfii walfakkaataa fudhannuu?'' jechuun gaaffii barreesseef deebii wayita deebisan ''amma dura yeroo muraasaaf kana gooneerra,'' jedhan.
''[Ergaan] dippiloomaasii Ambaasaaddara UKf irra deddeebiin dhiyaateera.
Kana duwwaa miti, furmaanni argamuu baannaan, filannoo yookaan maloota biroottis dhimma baana,'' jechuunis deebisaniiruf.
Magaalaa guddoo Eeritraa ija gaazexeessitoota BBC'n
Biyyi Jarman mirgi namoomaa biyya Ertiraa akka sirratu gaafatuurraan kan ka'e walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii rakoo godhateera.
Eertiraa: Amnastiin hidhamtoota siyaasaa 28 waggoota 18'f hiite akka gadhiiftuuf gaafate
Asmaraa: Magaalaa guddoo Eeritraa ija gaazexeessitoota BBC'n